Home - Nhau Dzevakuru - Page 2
I think my neighbour's wife arikutsvaga kuiswa neni - Please Help me before ndamuzvambura nayo. I am not one to read much into things but I know kana mukadzi achitsvaga sviro kwandiri. Last week I...
Tete Vee - June 22, 2019
How i cheated nababa vepanext door – kusvirwa nechimboro chakafuta!
How i cheated neBaba vepanext door murume arikubasa. Murume wangu anogara kuJoni but once in 2 weeks anouya sezvo achidriver maTrucks anoenda kuZambia. Tine imba kuBudiriro uko kwandinogara nevana. Handikwanise kugara kune murume wangu...
Max - April 20, 2019
Africa’s Miss Boootylicious Corazon Kwamboka in Pictures
Africa's Miss Boootylicious Corazon Kwamboka in Pictures that always get people going crazy on Social Media. Seems this curvy mama is always turning heads where ever she goes and we think we know why. When...
Tete Vee - April 20, 2019
Masvirirwo andakaitwa nemurume wemunhu ndikaita kunge beche richabvaruka. Ko ndaizivei kuti kusvirwa kunonaka kunge sugar chaiyo. Ndaigara nevabereki vangu apa ndainge ndavane 26years, baba vangu was so strict hanzi uchaita mukomana kana wakugara wega....
Max - January 22, 2019
Kuzasi kwangu kwaigara kwakanyorova, zvandakazoitwa nemwana wechikoro mucombi!
Kuzasi kwangu kwaigara kwakanyorova, zvandakazoitwa nemwana wechikoro mucombi!. Wainge uri musi weFriday makuseni ndakananga kubasa, combi yandainge ndiri makakwira mumwe mukomana atori mu uniform ndokubva agara paside pangu ndokundimhoresa achisekerera. Ndakaramba ndakamutarisa ndichizvibvunza kuti...
Max - January 21, 2019
Ndakamufongoresa pamuti ndokusumudza kaskirt ndokuinyudza yese!
Ndakafongoresa babe rakabata pamuti ndokusumudza kaskirt ndokuinyudza mboro yese! Musi uyu ndakafara sei iwe masasi eharare kubva pandakatanga kusvira 1998 ndanga ndisina kumbosvira mukadzi akapfeka tuma mini-skirt and zvaitondinetsa kuti nei zvichidaro. Pandakwira taxi...
Ndakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro!
Ndakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro! Taigara hedu mu Waterfalls ini na baba Shingi, ini ndiri mukadzi ane makore 27 and murume wangu ane 35 uye tine mwana mumwe achangotanga grade 1. Murume...
Max - January 19, 2019